२४ घण्टामै कसरी ट्रेन्डिङको दोस्रो स्थानमा पुग्यो ? ‘मेरो पनि होइन र यो देश ?’ | suryakhabar.com
Home मनोरञ्जन २४ घण्टामै कसरी ट्रेन्डिङको दोस्रो स्थानमा पुग्यो ? ‘मेरो पनि होइन र यो देश ?’
on: १२ बैशाख २०७८, आईतवार ०७:३० In: मनोरञ्जनTags: No Comments
१२ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक भएको २४ घण्टामा गायक÷सर्जक प्रकाश सपुतको गीत ‘मेरो पनि होइन र यो देश ?’ युट्युब ट्रेन्डिङको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ । सपुतको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरिएको उक्त गीतले शनिबार साँझसम्ममा ६ लाख ३२ हजार बढी भ्यूज बटुलिसकेको छ ।
सपुतले आफैँ रचेको गीतमा सङ्गीत पनि उनले नै दिएका छन् । मूल स्वर सपुतकै रहेको उक्त गीतको समूहगत गायनमा उनलाई कलाकार देवेन्द्र बब्लु, सुनिल विकलगायतले सघाएका छन् । “तत्काललाई प्रतिक्रिया राम्रै आएको छ, गीतमाथि विवेचना हुँदै जाला”, सपुतले भन्नुभयो, “गीत हाम्रै सामाजिक मनोदशाको एउटा चित्रण हो ।”
गीतको भिडियोमा हिमाल, पहाड, तराई र सातै प्रदेशका सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने सङ्गीत र नृत्यको सम्मिश्रणसमेत देख्न सकिन्छ ।
भारतमा एकैदिन २७ सयको मृत्यु, ३ लाख ४९ हजार संक्रमित थपिए